विचार शून्यता: कति सम्भव ? | We Nepali
नेपालको समय: ००:०९ | UK Time: 19:24
विचार शून्यता: कति सम्भव ?
२०७६ चैत १९ गते १५:०८
म कहिलेकाहीं सोच्छु, ‘मेरो मनमा धेरै कुरा किन खेल्छन् ?’ बिशेष गरी धेरै तनाव भएको बेला, काम धेरै भएको बेला, दु:ख परेको बेला, निन्द्रा नलागेको बेला, धेरै फुर्सदमा भएको बेला आदि समयमा हाम्रो मनमा धेरै नकारात्मक कुरा वा चिन्ता पर्ने कुरा आउँछन् । मेरो मात्रै हैन, यो हरेक मान्छेको मनमा आउने कुरा हो । आखिर किन त्यस्तो हुन्छ ? के मानिस विचार शून्यताको अवस्थामा रहन सक्छ ? के मानिस विचार र मनलाई एकातिर थन्काएर केवल शारीरिक रुपमा बाँच्न सक्छ ? मेरो विचारमा मानिस क्षणिक रुपमा विचार शून्यताको अवस्थामा रहन सम्भव भए पनि भौतिक रुपमा सक्रिय र स्वस्थ जीवन रहेसम्म विचार शून्यताको अवस्थामा रहनु सम्भव छैन ।
हरेक मानिस शारीरिक रुप, रंग र प्रकारमा मात्रै नितान्त अलग हैन, विचारमा पनि हरेक मानिस अद्वितीय वा फरक हुन्छ । सोच्ने कुरा वा मान्छेको मनमा आउने कुरा उसको हुर्काइ, बढाई, पढाई, अनुभव, संगत, आर्थिक, पारिवारिक र सामाजिक परिवेश आदि धेरै कुरामा फरक पर्छ । मानिसको जस्तो परिवेश, उस्तै जीवन भोगाई र त्यस्तै सोचाई हुन्छ ।
न हामी कसैको मनमा पस्न सक्छौ, न अरु कोही हाम्रो मनमा पस्न नै सक्छ । मेरो मनमा आउने कुरा अर्थात मैले सोच्ने कुरा अरु कसैले बुझ्न, जान्न र सोच्न समेत सक्दैन । यो अर्थमा ‘म’ नितान्त ‘म’ हुँ । तसर्थ पनि हरेक मानिस मेरो ‘म’ भएर बाँच्नु, सोच्नु र रमाउनु पर्दछ । किनकी यसको कुनै विकल्प नै छैन । जहाँ कुनै कुराको विकल्प छैन, त्यहाँ अरु थप कुरा सोचेर र चिन्ता गरेर बस्नु समयको बर्वादी हो ।
मानिसको स्वभाव नै खुसीमा रमाउने र दु:खमा चिन्तित हुने हो । त्यसैले आफ्नो सोच, भावना र परिस्थिति अनुसार मानिस खुसी र दु:खी हुने गर्दछ । सोच र भावनालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने हो भने हाम्रो मनलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ । तर, हरेक परिस्थिति मानिसको आफ्नो नियन्त्रणमा हुँदैन । तसर्थ हामी परिस्थिति र समयको दास बन्नुको विकल्प छैन । समय र परिस्थिति प्रतिकूल भएको बेलामा सकेसम्म आफ्नो मन र भावनालाई नियन्त्रण गर्ने हो भने मनमा आउने नकारात्मक सोचको बाढी र भेललाई केही हदसम्म रोक्न भने सकिन्छ ।
मानिस हरेक समय आफ्नो जीवनमा, आफ्नो परिवार र वरिपरि राम्रो कुरा मात्रै देख्न, भोग्न, सुन्न, जान्न र हेर्न चाहन्छ । हामी हाम्रो मनमा हरेक पटक राम्रो कुरा मात्रै सोच्न सकियोस भन्ने चाहना राख्छौं । के हरपल राम्रो कुरा अर्थात् दु:ख रहित कुरा मात्रै सोच्न सम्भव छ ? मेरो बिचारमा यो सम्भव छैन । मात्रै धेरै भन्दा धेरै समय राम्रो अर्थात सकारात्मक सोचका साथ राम्रो कुरा सोच विचार गरेर समय बिताउन भने सम्भव छ ।
जुन बेला हामी अधिक चिन्ता, तनाव वा नकारात्मक सोचमा हुन्छौ, त्यस्तो बेला कसरी सोचाई वा मनमा आउने कुरालाई रोक्ने होला भन्ने चिन्ता लाग्छ । त्यस्तो बेला किन यो मनमा आँधी वा हुरी चलेको होला जस्तो लाग्छ । तर, जुन बेला हाम्रो मनमा रमाइला कुराहरु चल्छन, सुखद अनुभूति दिने खालका कुराहरु आउँछन् त्यस्तो बेला भने मनका आउने कुराहरुलाई रोक्ने सोचाई नै आउँदैन । मन झन् आनन्दित हुन्छ । तसर्थ, हाम्रो मनमा कस्ता कुरा खेलाउने भन्ने कुराले खुसी हुने, जीवनमा सकारात्मक सोच्ने र समग्र मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पर्छ ।
ध्यान गर्दा, निन्द्रामा पर्दा, कुनै कारणले गम्भीर रुपमा अस्वस्थ हुँदा आदि अवस्थामा मानिस क्षणिक रुपमा विचार शून्यताको अवस्थामा हुन्छ । विचार शून्यताको अवस्थामा मानिसको मनबाट सबै कुरा अस्थायी रुपमा हराउँछ । यस्तो अवस्थामा मानिसलाई कुनै केही कुरासंग मतलब हुने कुरै भएन । तर, त्यो अस्थायी वा क्षणिक रुपमा हुने कुरा भयो । त्यसैले जबसम्म मानिसको शरीर रहन्छ, वा जबसम्म मानिस स्वस्थ मानिसको रुपमा बाँच्छ तबसम्म मानिसको मनमा विचार आउंछ । मानिसको मनमा धेरै कुरा खेल्छन् ।
मनमा आउने विभिन्न विचारलाई नियन्त्रण गर्ने ध्यानले मानिसको सकारात्मक सोच्ने, ध्यान केन्द्रित हुने, बेकारमा मनमा धेरै कुरा खेलाउने बानी हटाउने, चिन्ता हटाउने, कुनै कुलतबाट बचाउने, भावनात्मक सम्बन्ध बढाउन सहयोग पुर्याउने आदि मद्दत गर्छ । आफ्नो मनलाई काबुमा राख्न सके धेरै कुरामा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । खुसी र सुखी रहन मानिसको जीवनमा शारीरिक स्वास्थ्य मात्रै हैन मानसिक स्वास्थ्यको पनि एकदम महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
अब कुरा आउँछ, कस्तो कुरा आफ्नो मनमा खेलाउने र कसरी आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गर्ने ? हरेक मानिसले यो केवल आफैले गर्ने निर्णय हो । यो हरेक मानिसको आफ्नै छनौट हो । खुसी, सुखी र स्वस्थ रहने हो भने मनमा राम्रो कुरा खेलाउनु पर्यो, राम्रो कुरा सोच्नु पर्यो, राम्रो कुरा गर्नु पर्यो र सकारात्मक सोचका साथ जीवन जीउनु पर्यो । सुख र दु:ख हरेक मानिसको जीवनको अभिन्न अंग हुन् । आफ्नो हैसियत र परिस्थिति अनुसार सबैलाई कुनै न कुनै बेला सुख र दु:खको सामना गर्नु पर्छ । खुसी रहने हो भने बिगतका दु:खका कुरा बिर्सेर सम्झना लायक अतितलाई मात्रै सम्झनु पर्यो । सुखद भविष्यको लागि सुनौलो भविष्यको कल्पना गर्दै त्यसको लागि कार्य योजना बनाई इमान्दारिताका साथ कडा मेहेनत गर्नु पर्यो । भौतिक संसारमा जब आफ्नो सपना साकार हुन्छ, भनेको पुग्छ अनि मन आनन्दित हुन्छ ।
बाहिरी अर्थात भौतिक संसारमा रमेर मात्रै खुसी प्राप्त गर्न सकिंदैन । यसको लागि मनमा आउने विचार पनि शुद्ध हुनु जरुरी छ । आफ्नो भित्री संसारमा र आध्यात्मिक रुपमा खुसी हुन मनलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्छ । यो काम गर्न मनलाई कस्तो बनाउने, कसरी नियन्त्रणमा राख्ने वा नियन्त्रण बाहिर छोड्ने भन्ने कुरा हरेक व्यक्तिको नितान्त आफ्नै कुरा हो । सबैलाई सुखी र खुसी जीवनको शुभकामना ।